डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै साझा पार्टीले प्रदर्शन गर्ने – Samabeshi Khabar
डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै साझा पार्टीले प्रदर्शन गर्ने
२० आश्विन २०७७, मंगलवार ०८:५३ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, २० असोज (ससं) । २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न माग गर्दै साझा पार्टीले आज प्रदर्शन गर्ने भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र राख्नुपर्ने माग गर्दै साझा पार्टी बागमती प्रदेशले दिउँसो ४ बजे बालुवाटारमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न लागेको हो।
भदौ २९ गते जुम्लाबाट थालेको डा केसीको अनशन २३ औं दिनमा पुगेको छ। हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । तर,सरकारले उनका मागप्रति कुनै चासो देखाएको छैन् ।
र भोली बालुवाटारमा!
सामाजिक दूरी कायम गर्दै र अन्य सुरक्षा उपायहरू पूर्णत: अवलम्बन गर्दै। आउनोस्। नत्र माफियाको पैसामा चुर्लुम्म डुबेका यिनीहरूले डा केसीलाई मार्नेछन् र मनमनै भन्नेछन्: "बडार्नु पर्ने कसिंगर, हावाले उडाएर लग्यो।" यिनको मनमा मानवता, इमान केही छैन। अब भ्रममा नपरौँ। pic.twitter.com/s0Qv8yPZpv
— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) October 5, 2020
Posted in ब्यानर, राजनीति, समाचार
प्रचण्ड–नेपाल समूहद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको पुनः राजीनामा माग
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १६:३८ by Samabeshi Khabar